Maka onye ọ bụla nọrọ ndụ na cubicle nke ụlọ ọrụ America, obi abụọ adịghị ya na ị hụla ma ọ dịkarịa ala otu warara Dilbert na-eme ya na ọfịs. Egwuregwu Scott Adams dị ka onye edemede na-atọ ọchị maka ya, n'agbanyeghị. Echere m na nke a bụ ihe akaebe na nkà na ihe ịga nke ọma abụghị egwuregwu nke ohere. Fọdụ n'ime ihe kacha amasị m bụ mgbe ọ na-ekenye asụsụ ma ọ bụ katuunu nke na-emeghị site na usoro nyocha nke usoro ntinye.
Nke kacha mma maka Scott na akwụkwọ ya. Kedu ihe nke a na Teknụzụ Azụmaahịa metụtara? Echere m na ọ bụ akụkọ na-akpali akpali na ndị folks nwere ike gbanwee blog n'ime akwụkwọ. Seth Godin ji ya mee ya Obere Bụ Big ọhụrụ: na 183 Riffs ndị ọzọ, ụgbọ mmiri, na echiche azụmahịa dị ịrịba ama, Chris Baggott mere ya na Ahịa Email Site Ọnụ Ọgụgụ: Otu esi eji Ngwá Ọrụ Ahịa Marketingwa Kasị Mma iji Were Organizationtù ọ bụla na Ọkwa Ọzọ ugbu a Scott na-eji akwụkwọ ya eme ya.
Tags: Onwukaakwụkwọ ahịaenwe enweadams scottseth godin